Ọ na-atọ ya ụtọ ịgụ Gartner buru amụma banyere teknụzụ 10 kacha elu maka 2011Na otú otu amụma ọ bụla si emetụta ahịa dijitalụ. Ọbụna ọganihu na nchekwa na ngwaike na-emetụta ikike ụlọ ọrụ ịmekọrịta ma ọ bụ ịkekọrịta ozi na ndị ahịa na atụmanya ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma.
Cloud Computing - Ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ dị iche iche site na ọha na eze mepere emepe na nzuzo. Afọ atọ sochirinụ ga-ahụ nnyefe nke igwe ojii ọrụ dị nso na-adaba n'etiti oke abụọ a. Ndị na-ere ahịa ga-enye ngwugwu igwe ojii na-enweghị ngwugwu nke na-anapụta teknụzụ ọrụ igwe ojii nke ọha na eze (ngwanrọ na / ma ọ bụ ngwaike) na usoro (yabụ, omume kacha mma iji wuo ma rụọ ọrụ ahụ) n'ụdị enwere ike itinye n'ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa. Ọtụtụ ga-enyekwa ọrụ njikwa iji jikwaa njikwa ọrụ igwe ojii arụ ọrụ. Gartner na-atụ anya ka nnukwu ụlọ ọrụ nwee otu ndị na-eme ngwa ngwa na 2012 nke na-ahụ maka mkpebi na njikwa igwe ojii na-aga n'ihu.
Ihe omuma-Ama Kọmputa - Ebe ngosiputa ihe omuma banyere ihe omuma banyere echiche nke iji ihe omuma banyere onye oru ma obu ihe gburugburu ya, ihe omuma ya na ochicho gi iji meziwanye nmekorita nke onye oru a. Onye njedebe ikpeazụ nwere ike ịbụ onye ahịa, onye ọlụlụ ma ọ bụ onye ọrụ. Usoro ihe omuma banyere ihe omuma banyere ihe ndi mmadu choro choro ma jiri aka ha nye ndi oru, oru ma obu oru aka kachasi nma. Gartner na-ebu amụma na site na 2013, ihe karịrị ọkara nke ụlọ ọrụ Fortune 500 ga-enwe atụmatụ ịkọwapụta gburugburu ebe obibi na site na 2016, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ịzụ ahịa ahịa ekwentị mkpanaka ga-abụ nke dabeere na ya.
Ubiquitous Mgbakọ - Ọrụ nke Mark Weiser na ndị nchọpụta ndị ọzọ na Xerox's PARC na-ese onyinyo ọbịbịa nke atọ nke mbido ebe kọmputa na-abanye na-adịghị ahụ anya n'ime ụwa. Dika komputa na abawanye na dika enyere ihe nke ubochi ikike iji mkparita aka na mkpado RFID na ndi ozo ha, netwọkụ gha abiaru ma gabiga ogo nke enwere ike ijikwa ya na uzo ndi ozo. Nke a na - eduga na usoro dị mkpa nke imbuing sistemu kọmpụta n'ime teknụzụ arụmọrụ, ma eme ya dị ka teknụzụ dị jụụ ma ọ bụ jikwaa ma jikwaa ya na IT. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ntụzịaka dị mkpa banyere ihe anyị ga-atụ anya ya na ngwaọrụ nke na-aba ụba, mmetụta nke ịre ahịa na mkpebi IT, yana ikike ndị dị mkpa nke nrụgide nke mmụba ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ kọmputa maka onye ọ bụla ga-akwalite.